အပေါ် Posted 06 / 01 / 2021 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
ရင်သား - ကင်ဆာအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မည်မျှသိသနည်း
FDA က Apprvoal အားဖြင့်လက်တွေ့ရလဒ်များ
မည်သူသည် Neratinib လိုအပ်ပါသလဲ။
ရင်သားကင်ဆာသည်အမျိုးသမီးများတွင်အများဆုံးသောကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုအားလုံး၏ ၁၅% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုအသစ် ၂၅၂,၇၁၀ ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရောဂါမှအမျိုးသမီး ၄၀,၆၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်ရောဂါအသစ် ၂၄၇၀ ခန့်ဖြင့်ရင်သားကင်ဆာသည်အမျိုးသားများအပေါ်တွင်လည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။
ရင်သားကင်ဆာအကျိတ်များ၏ ၁၅% မှ ၂၀% သည် HER15-positive ဖြစ်သည်။ HER20 အဆင့်မြင့်မားသောရင်သားကင်ဆာသည် metastasis၊ ကုသမှုမလုံလောက်ခြင်းနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းများအတွက်အန္တရာယ်မြင့်မားသည်။
Trastuzumab (Herceptin) ၏ HER2 receptor ရန်တီထွင်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲ US Food and Drug Administration (FDA) ၏အတည်ပြုချက်သည် HER2-positive ရောဂါရှိသည့်လူနာများအတွက်ကုသမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Trastuzumab ကိုဓာတုကုထုံးဖြင့်ထည့်သွင်းသောအခါအစောပိုင်းအဆင့်ရှိအမျိုးသမီးများအတွက်အလုံးစုံရှင်သန်မှုနှုန်း HER2-positive ရင်သားကင်ဆာ အထိ ၃၇% အထိတိုးတက်လာသည်။ သို့သော်လူနာ ၂၆% ခန့်သည် trastuzumab ဖြင့်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်ထပ်တလဲလဲရောဂါဖြစ်ပွားတတ်သည်။
HER2-positive ရင်သားကင်ဆာကိုပစ်မှတ်ထားသောအခြားကုထုံးများသည် pertuzumab (Perjeta)၊ monoclonal antibody တစ်ခု၊ ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla)၊ ဓာတုကုထုံးဆိုင်ရာဆေးနှင့်တွဲဖက်ပြီး monoclonal antibody တစ်ခု၊ နှင့် lapatinib (Tykerb) တစ် kinase inhibitor ။
လက်တွေ့ရလဒ်များ FDA က Apprvoal အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
Neratinib ၏ FDA ၏ခွင့်ပြုချက်သည် Phase III ExteNET ၏စမ်းသပ်မှု၊ multicenter, randomised, double-blind, နှင့်ရလဒ်များအရရလဒ်များအရရလဒ်များအရရလဒ်များသည် nerinib ၏ထိန်းချုပ်မှုသည် adjuvant trastuzumab ကုသမှုပြီးနောက်။ ဒီစမ်းသပ်မှုမှာအစောပိုင်းအဆင့် HER2,840-positive ရင်သားကင်ဆာရှိတဲ့အမျိုးသမီး ၂,၈၄၀ နဲ့ adjuvant trastuzumab ပြီးပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာဒီစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များတစ်နှစ်များအတွက် neratinib (= = 2) သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (= = 1420) ဖြစ်စေလက်ခံရရှိရန်ကျပန်းခဲ့ကြသည်။ ExteNET စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များအရနှစ်နှစ်ကြာပြီးသည့်နောက်တွင်ထိုးဖောက်ခြင်းမှရောဂါကင်းစင်သည့်ရှင်သန်မှု (iDFS) သည် neratinib နှင့်ကုသသောဘာသာရပ်များတွင် ၉၄.၂% ရှိကြောင်း၊
Neratinib ကိုလည်းအဆင့် (၃) NALA စမ်းသပ်မှုတွင် HER2-positive metastatic ရင်သားကင်ဆာရှိသည့်လူနာများတွင် neratinib ပေါင်း capecitabine ကိုပါ ၀ င်သည့်ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုတွင်အကဲဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၂၁ ရက်သံသရာတစ်ခုစီအတွက် ၁ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိနှုတ်ဖြင့်နှစ်ကြိမ်နှုတ်ဖြင့်ပေးသော capecitabine2mg / m621 နှင့်တစ်ရက်လျှင်တစ်နေ့လျှင် ၂၄၁ မီလီဂရမ်နှုတ်အားဖြင့်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်နှုတ်ဖြင့်လက်ခံရရှိရန်အတွက် ၁ - ၁ ကိုလေ့လာခဲ့သည့်လူနာ ၆၁၁ ယောက်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ n = 1) သို့မဟုတ် lapatinib 1 မီလီဂရမ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း 240-1 ရက်များတွင်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်နှုတ်အားဖြင့် ၁-၁၁ ရက်တွင် ၂၁ ရက်သံသရာအတွက် ၁-၁၄ ရက်တွင်နှုတ်ဖြင့်နေ့စဉ်နှစ်ကြိမ်ပေးသည့် capecitabine 21 mg / m750 (n = 2) ။ လူနာများရောဂါတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်လက်မခံနိုင်အဆိပ်သင့်သည်အထိကုသခံခဲ့ရသည်။ neratinib နှင့် capecitabine နှင့်အတူကုသမှု lapatinib ပေါင်း capecitabine နှင့်အတူကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုးတက်မှု - အခမဲ့ရှင်သန်မှု (PFS) အတွက်ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာတိုးတက်မှုအတွက်ရလဒ်။ ၁၂ လမှာ PFS နှုန်းက ၂၉% ဖြစ်ပြီး neratinib ပေါင်း capecitabine ကိုခံယူတဲ့လူနာတွေအတွက် ၁၅% နဲ့ lapatinib + capecitabine ကိုခံယူတဲ့လူနာတွေအတွက်၊ PFS နှုန်းသည် ၂၄ လတွင် ၁၂% နှင့် ၃% အသီးသီးရှိသည်။ Medecat OS သည် neratinib ကို capecitabine နှင့်ပေါင်းပြီး ၂၁ လကြာသည်။ ၁၈.၇ လသည် lapatinib နှင့် capecitabine ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။
ဘာ Is NEratinib?
နာရတီနစ် (CAS: 698387-09-6ရင်သားကင်ဆာ၏ကြီးထွားမှုနှင့်ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးထားသောပစ်မှတ်ထားသော (ဇီဝဗေဒ) ကုထုံးဆေးဖြစ်သည်။ Neratinib သည်ဆေး၏အမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သောအမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ် Nerlynx ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူသည် Might N လိုအပ်သည်Eratinib?
Neratinib ကိုရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားသူနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည် -
positive ဟော်မုန်းကိုလက်ခံသည့်အပြုသဘောဆောင်သော (အီစရိုဂျင်သို့မဟုတ်ပရိုဂျက်စတုန်းဟော်မုန်းများကကြီးထွားရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောရင်သားကင်ဆာ)
❷ HER2 positive (HER2 protein ထက်ပုံမှန်ထက်ပိုသောရင်သားကင်ဆာ)
ရင်သားကင်ဆာဟာ HER2-positive ရှိမရှိသိရှိနိုင်ဖို့စမ်းသပ်မှုများစွာရှိပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးစမ်းသပ်မှုနှစ်ခု
IHC စမ်းသပ်မှုသည် HER2 ပရိုတိန်းများကိုအစွန်းအထင်းဖြစ်စေရန်ဓာတုဆိုးဆေးအသုံးပြုသည်။ ရင်သားကင်ဆာတစ်သျှူးနမူနာရှိဆဲလ်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ HER0 ပရိုတိန်းပမာဏကိုတိုင်းတာသည့် IHC သည်3မှ 2+ ရမှတ်များပေးသည်။ အကယ်၍ ရမှတ်သည်0မှ 1+ ဖြစ်လျှင်၎င်းသည် HER2-negative ဖြစ်သည်။ ရမှတ် 2+ ဖြစ်ပါက၎င်းသည်နယ်စပ်မျဉ်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ 3+ ရမှတ်ကို HER2-positive ဟုမှတ်ယူသည်။
အကယ်၍ IHC စစ်ဆေးမှုရလဒ်သည်နယ်နိမိတ်ဖြစ်လျှင်ကင်ဆာတစ်ရှူးနမူနာတစ်ခုတွင် FISH စစ်ဆေးမှုကို HER2-positive ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
❷ ငါး (situ Hybrid ခုနှစ်တွင်ချောင်း)
FISH စစ်ဆေးမှုတွင် HER2 ပရိုတင်းများနှင့်ကပ်ထားသောအထူးတံဆိပ်များကိုအသုံးပြုသည်။ အထူးတံဆိပ်များတွင်၎င်းတို့တွင်ဓာတုပစ္စည်းများထည့်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့် HER2 ပရိုတင်းများနှင့်ကပ်သောအခါမှောင်မိုက်သွားသည့်အခါအရောင်ပြောင်းသွားသည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုဟာအတိကျဆုံးဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ပိုပြီးစျေးကြီးပြီးရလဒ်တွေကိုပြန်ရဖို့အချိန်ယူရတယ်။ ထို့ကြောင့် IHC စစ်ဆေးမှုသည်ကင်ဆာ HER2-positive ရှိမရှိသိရှိရန်ပထမဆုံးပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။ FISH စစ်ဆေးမှုအရသင်သည်အပြုသဘော (သို့) အနှုတ်လက္ခဏာရမှတ်ရသည် (အချို့သောဆေးရုံများကအပျက်သဘောစစ်ဆေးမှုရလဒ်ကို“ သုည” ဟုခေါ်သည်)
HER2-positive ရင်သားကင်ဆာဟာ HER2 ပရိုတင်းကိုများများစားစားလုပ်တယ်။ HER2 ပရိုတိန်းသည်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်။ ကင်ဆာကိုကြီးထွားရန်နှင့်ပြန့်ပွားရန်ညွှန်ပြသည့်အချက်ပြမှုကိုခံယူသည်။ ရင်သားကင်ဆာ ၄ ခုလျှင် ၁ ခုသည် HER2-positive ဖြစ်သည်။ HER2-positive ရင်သားကင်ဆာသည် HER2-negative ရင်သားကင်ဆာထက်ပိုမိုရန်လိုပြီးကုသရန်ခက်ခဲလေ့ရှိသည်။ Neratinib သည်နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော pan-HER inhibitor ဖြစ်သည်။ Neratinib သည် HER2-positive ရင်သားကင်ဆာကြီးထွားမှုအချက်ပြမှုကိုကင်ဆာဆဲလ်များ၏စွမ်းရည်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်တိုက်ထုတ်သည်။
Neratinib တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ပစ်မှတ်ထားကုထုံး, သို့သော် Herceptin (ဓာတုဗေဒအမည်: trastuzumab), Kadcyla (ဓာတုဗေဒနာမကိုအမှီ: T-DM1 သို့မဟုတ် ado-trastuzumab emtansine) နှင့် Perjeta (ဓာတုနာမ: pertuzumab) နှင့်မတူဘဲ, ဒါဟာကိုယ်ခံစွမ်းအားပစ်မှတ်ထားကုထုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားပစ်မှတ်ထားသောကုထုံးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်များမှပြုလုပ်သောပlikeိပစ္စည်းများကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သောသဘာဝဖြစ်ပေါ်စေသောပodိပစ္စည်းများ၏ပုံစံများဖြစ်သည်။ Neratinib သည်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊
အကြံပြုထားသည့် neratinib ပမာဏမှာ ၂၄၀ မီလီဂရမ် (၆ လုံးဆေးပြား) ဖြစ်ပြီး၊ တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်အစာဖြင့်အစာနှင့်နေ့စဉ်သောက်ပြီး ၁ နှစ်ဆက်တိုက်အသုံးပြုသည်။ Neratinib ကို ၄၀ မီလီဂရမ်တက်ဘလက်အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။
antiidiarrheal prophylaxis အတွက် loperamide ကို neratinib ၏ပထမဆုံးဆေးနှင့်အတူတွဲ သုံး၍ ပထမ ၂ သံသရာ (ဆိုလိုသည်မှာ ၅၆ ရက်) ကုသပြီးနောက်လိုအပ်သလိုဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည်။ လူနာများကိုအူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှုများကိုနေ့စဉ် ၁ မှ ၂ ထိထိန်းသိမ်းရန်ညွှန်ကြားသင့်သည်။ ထို့အပြင်ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါကုသနည်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုညွှန်ကြားသင့်သည်။
လူနာတစ် ဦး ချင်းစီသည်းခံနိုင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောဆေးထိုးပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆေးထိုးခြင်းလျှော့ချရန်အကြံပြုချက်များကိုသတ်မှတ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပြင်းထန်သော Hepatic ချို့ယွင်းမှုရှိသောလူနာများအတွက်စတင်သော neratinib ဆေးကို 80 mg သို့လျှော့ချသင့်သည်။
မှတ်ချက် - ဒေတာအားလုံးသည်ရည်ညွှန်းချက်သာဖြစ်သည် NERLYNX (neratinib) တက်ဘလက်များ (PDF)
neratinib စတင်ပြီးနောက်မကြာမီပြင်းထန်သောဝမ်းလျှောရောဂါသည်အဖြစ်များသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ ExteNET စမ်းသပ်မှုတွင် neratinib နှင့်ကုသသောအမျိုးသမီး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်ပြင်းထန်ဝမ်းလျှောခြင်းရှိကြသည်။
LDA ၏အတည်ပြုချက်အရ loperamide (အမှတ်တံဆိပ် Imodium, Kaopectate 1-D နှင့် Pepto Diarrhea Control တို့ပါ ၀ င်သည့်အမှတ်တံဆိပ်များ) ကို neratinib နှင့်ပထမဆုံး ၅၆ ရက်ကုသမှုခံယူရန်နှင့်ထို့နောက် ၀ မ်းလျှောရောဂါကိုစီမံရန်ကူညီရန်လိုအပ်သည်။
အခြားဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ နာတာရှည် ခေါင်းစဉ်:
ရှားပါးကိစ္စများတွင် နာတာရှည် ပြင်းထန်သောအသည်းပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင့်တွင်အောက်ပါအသည်းပြproblemsနာတစ်ခုခုရှိလျှင်သင့်ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပြပါ။
AASraw သည် Neratinib ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
neratinib ၏ပါးစပ် kinase inhibitor ၏ FDA ၏အတည်ပြုချက်သည်အစောပိုင်းအဆင့်၊ HER2-positive ရင်သားကင်ဆာရှိသည့်သင့်လျော်သောလူနာများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးတိုးချဲ့ထားသော adjuvant ကုသမှုနည်းလမ်းကိုရရှိခဲ့သည်။ ကင်ဆာ။ HER2-positive နှင့်အတူလူနာ ရင်သားကင်ဆာ ဘယ်သူလက်ခံရရှိခဲ့သည် နာတာရှည် တစ်နှစ်သည်ဓာတုကုထုံးနှင့် trastuzumab-based adjuvant ကုထုံးပြီးနောက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာရခဲ့သည့်လူနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည့် ၂ နှစ်တာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကင်းစင်သည့်ရှင်သန်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
 Chan A, Delaloge S, ကေတီဟုမ်း၊ ExteNET လေ့လာရေးအဖွဲ့အတွက်။ HER2positive ရင်သားကင်ဆာ (ExteNET) နှင့်အတူလူနာများအတွက် trastuzumab-based adjuvant ကုထုံးပြီးနောက် Neratinib: multicentre, ကျပန်း, double- မျက်စိကန်း, placebocontrolled, အဆင့်3ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Lancet Oncol ။ 2016; 17: 367-377 ။
 အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု။ ရင်သားကင်ဆာပြန်လာနိုင်ခြေကိုလျှော့ချရန်ကုသမှုအသစ်ကို FDA ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ ဇူလိုင်လ 17, 2017 ။
 Nerlynx (neratinib) တက်ဘလက်များ [သတင်းအချက်အလက်ကိုညွှန်ကြားခြင်း] ။ Los Angeles မြို့, CA: Puma ဇီဝနည်းပညာ ဇူလိုင်လ 2017 ။
 အမျိုးသားကင်ဆာဌာန။ HER2-positive ရင်သားကင်ဆာကိုဆန့်ကျင်တက်ကြွသောပစ်မှတ်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ - မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ။ ၂၀၁၄ ဇွန် ၁ ရက်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ www.cancer.gov/types/breast/research/altto-qa ။ ဝင်ရောက်စက်တင်ဘာလ 1, 2014 ။
 Singh က J, Petter RC, Baillie TA, Whitty A (Aprilပြီလ ၂၀၁၁) ။ "covalent မူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ကျော့ပြန်လာ" ။ သဘာဝသုံးသပ်ချက်များ။ မူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု။ 2011 (10): 4-307 ။ Doi: 17 / nrd10.1038 ။ PMID 3410. S21455239CID2။
 Minami Y, Shimamura T, Shah K, LaFramboise T, Glatt KA, Liniker E, et al ။ (ဇူလိုင်လ 2007) ။ "ERBB2 ၏အဓိကအဆုတ်ကင်ဆာ - ဆင်းသက်လာ Mutant Oncogenic ဖြစ်ကြပြီးနောက်ကြောင်းပြန်မလှည် EGFR / ERBB2 inhibitor HKI-272 မှ sensitivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်" ။ Oncogene ။ 26 (34): 5023-7 ။ Doi: 10.1038 / sj.onc.1210292 ။ PMID 17311002 ။
 အမျိုးသားကင်ဆာဌာန။ အထီးရင်သားကင်ဆာကုသမှု (PDQ) - ကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗားရှင်း။ နောက်ဆုံးရေးသားချိန်မေလ ၂၅ ရက်၊ 25. www.cancer.gov/types/breast/hp/male-breast-treatment-pdq ။ ဝင်ရောက်စက်တင်ဘာလ 2017, 22 ။
9504 Views စာ
ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးများ Acalabrutinib: CLL / SLL / MCL အတွက်ကုသမှု Sunitinib Malate အကြောင်းမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - AASraw